FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Jiro famantarana vonjy taitra afo / jiro dyD-B tsy mipoaka
1. Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solika, fanadiovana solika, indostrian'ny simika, miaramila ary toerana mampidi-doza hafa, ho toy ny famantarana fivoahana azo antoka, torolàlana momba ny fandroahana;
6. Mety amin'ny tontolo iainana ambany hafanana ambony -40.
1. Aluminum firaka maty-fanariana akorandriaka, ambonin'ny tosidra avo electrostatic tifitra.
2. Fanamboarana loharanon-jiro LED avo lenta avo lenta, fanjifana herinaratra ambany, famirapiratana avo, mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana
3. Naorina-in tsy fikojakojana ny bateria Ni-MH fonosana, ny asa ara-dalàna ny mandeha ho azy fiampangana, hery tsy fahombiazana mety ho vonjy taitra famatsiana herinaratra 90 minitra.
4. Miaraka amin'ny famolavolana manokana ny faritra azo antoka amin'ny ankapobeny, ny fiarovana ny overcharge, ny fiarovana ny faritra fohy, ny fiarovana ny fiarovana ary ny fiarovana hafa, dia miantoka tsara ny fampiasana ny fampisehoana.
5. Manana ny asan'ny fanamarinana isam-bolana, mandeha ho azy ny fivoahana indray mandeha isam-bolana, ny fanjakana vonjy taitra mba hihazonana 120s, mandeha ho azy ny famerenana amin'ny laoniny ny fahefana lehibe fanjakana.
6. Miaraka amin'ny asa fanaraha-maso isan-taona, isan-taona dia nafindra ho azy avy amin'ny fanjakana elektrika lehibe mankany amin'ny toetry ny asa maika sy ny fivoahana tsy tapaka, ary avy eo dia mamerina ny toetry ny hery lehibe, famerenana amin'ny laoniny ny fanjakana lehibe.
7. Avo fiarovana ny firafitry ny famolavolana, ny fanamafisana ny anti-aging silicone fingotra famehezana gasket, mba hahazoana fiarovana tsara fampisehoana.
8. Ny endrika maivana, izany hoe ny jiro mahazatra sy ny jiro vonjy maika dia aseho ao amin'ny famatsiana herinaratra mahazatra, mandeha ho azy amin'ny toetry ny vonjy taitra, fandefasana batterie maika, fotoana maika tsy latsaky ny 90 minitra.
9. Famantarana evacuation tontonana fampisehoana manana lamina isan-karazany azo isafidianana, azo namboarina araka ny takian'ny mpampiasa ihany koa.
10. Ny fasteners miharihary rehetra dia vita amin'ny vy tsy misy pentina.
11. Mety ho ny vy na tariby tariby.
Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny modelimplication ny fifantenana tsy tapaka, ary ny Ex-mark dia tokony ampiana ao ambadiky ny modelimplication.Ny môdely dia toy izao manaraka izao: kaody ho an'ny vokatra modelin'ny implication + Ex-mark. Ohatra, ny filàna jiro tsy mipoaka, ny isa 20, ny vokatra modely dia: dyD-B+ Ex e ib q IIC T6 Gb +20.
teo aloha: dYD andian-jiro tsy mipoaka (LED) jiro fluorescent
Manaraka: BAD63-A andian-dahatsoratra fipoahana-porofo fahombiazana avo lenta sy angovo jiro LED
Jiro fivoahana vonjy maika tsy misy fipoahana
Jiro vonjy maika tsy misy fipoahana
Jiro vonjy taitra tsy mipoaka
Jiro vonjy maika tsy mirehitra